Maxay Tahay U Jeedadda Ay Hargaysa U Yimaadeen Weftiga Ka Socda Baarlamaanka Jabuuti? | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Maxay Tahay U Jeedadda Ay Hargaysa U Yimaadeen Weftiga Ka Socda Baarlamaanka Jabuuti?
Published on October 9, 2018 by sdwo · No Comments
Hargaysa (SDWO): Wefti ka socda dalka jamhuuriyadda Jabuuti oo xildhibaano ah ayaa maanta soo gaadhay caasimadda Somaliland ee Hargaysa, kuwaasoo ka qayb geli doona shir beri ka furmaya magaaladda Hargaysa.
Weftigan reer Jabuuti oo ka kooban saddex xubnood waxaa hogaaminaya xildhibaan C/raxmaan Cawaale Yaasiin, oo ah guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka dalka jamhuuriyadda Jabuuti, iyo xubin metelaya xisbiga mucaaradka Jabuuti.
Waxaana weftiga Jabuuti madaarka diyaaradaha Hargaysa ku soo dhaweeyay wasiirka cadaaladda Somaliland C/qani Maxamuud Caateeye iyo xildhibaano ka tirsan guddi hoosaadka arrimaha dibadda golaha Wakiiladda.
Xildhibaan Axmed Cabdi Kijaandhe, guddoomiyaha guddi hoosaadka arrimaha dibadda golaha Wakiiladda Somaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay u jeedadda xildhibaanadda Jabuuti ka socdaa Hargaysa u yimaadeen.
Waxaanu yidhi “Waxaanu halkan ku soo dhawaynaynaa, wefti ka socda baarlamaanka Jabuuti oo ka kooban, laba xildhibaan oo xisbiga muxaafadka ah iyo xildhibaan ka tirsan xisbiga mucaaradka Jabuuti.
Waxaanay ka qayb geli doonaan shir beri ka furmaya Hargaysa, oo ah shir caalamiya oo siyaasadda arrimaha dibadda Somaliland lagu falan-qayn doono”.
Waxaanu intaas raaciyay “Waxaanu leenahay soo dhawaada, gurigiinii labaad ayaad timaadeen. Sidaa iyo gacmo furan ku soo dhawaadda ayaanu leenahay”.
Geesta kale danjiraha Somaliland u fadhiya dalka Jabuuti, oo weftigan la socday ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay in weftiga reer Jabuuti ay shirka ku saabsan siyaasadda arrimaha dibadda Somaliland ka soo qayb galaan.
“Farxad ayay noo tahay maanta in saddexdan xildhibaan ee ka yimid Jabuuti ay ka soo qayb galaan shirkan muhiimka ah. Ma aha wax cusub, waanay socon doonaa, xildhibaano Somaliland ka socdaana way tegi doonaan Jabuuti.
Waxaanan jecel nahay in mustaqbalka uu xidhiidhku noqdo mid joogto ah”ayuu yidhi wakiilka Somaliland u fadhiya dalka jamhuuriyadda Jabuuti.
Dhinaca kale guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka dalka jamhuuriyadda Jabuuti xildhibaan C/raxmaan Cawaale Yaasiin, oo weftigan hogaaminayay ayaa ka mahad naqay sida diiran ee Hargaysa loogu soo dhaweeyay.
Isagoona tilmaamay in ay rejaynayaan in shirka ay ka qayb gelayaan uu noqdo mid muhiima oo wax badan lag isku waydaarsado. Waxaanu yidhi “Waxaan nahay wefti xildhibaano ka kooban. Laba xildhibaan oo ka tirsan xisbiga muxaafidka ah iyo xildhibaan xisbiga mucaaradka ah ka tirsan.
Masuuliyiintani way ku mahadsan yihiin soo dhawayn tani. Waxaanan rejaynayaa in shirka aanu u nimid uu noqdo mid qiimo leh, oo waxyaabo badan aanu is waydaarsan doono.
Soo dhawayntooda na aad ayaanu masuuliyiintani ugaga mahad naqaynaa. Wadankayagii labaad ayaanu joognaa”.